Meeshaan umuriidhaan sirna aduu caalu abuurame - BBC News Afaan Oromoo
Saayintistoonni dhakaa hawaarraa lafatti kufe qo'achaa turan meeshaa umuriin sirna aduu caalu argachuu isaanii dubbatan.
Dhakaa hawaarraa kufe kana keessa wanta akka awwaaraa bullaa'aa tahe argataniiru- dhakichi bara 1960tti ture kan kufe. Wanti kunis umuriinsaa waggaa biiliyoona 7.5tti tilmaamama.
Waanti akka awwaaraa kun urjii keessatti kan uumame sirni aduu otoo hin dhalatiin dura ture.
Gareen qorattootaa bu'aa qorannoo isaanii barruu Naashinaal Akkaadaamii oof Saayinsiitti baasaniiru.
Urjiileen gaafa du'an waantonni xixxiqqoon achi keessatti uumaman gara hawaatti darbatamu. Waantonnni akka awwaaraa kun urjii, pilaaneetii, addeessaafi dhakaa urjii waliin dabalamu.
''Jajjaboo fi awwaara urjii irraa urgufamani dha,'' jedha Chikaagootti ogeessa kunuunsa godambaafi asoosheeyit piroofeesarii kan tahe Fiilip Heek.
Gareen qorattootaa Ameerikaa fi Siwiizarlaand irraa walitti babba'an urjii hawaarraa kufee dhakaa tahe, kan ji'oolojistiin Murshinoo bara 1969tti Awustiraaliyaatti argate keessatti argaman waantota akka awwaaraa tahuun sirna aduun dura harca'an 40 qo'atan.
NASA'n rokkeettii gara aduutti furguggise
Itoophiyaaf carraan maqaa hawwaa moggaasuu maaliif kennameef?
''Urjii hawaarraa lafatti kufee caccabee gara daakuutti geeddarameerraa jalqabne,'' jedhan barreessaan gargaaraa Jeeniikaa Giriir Muziyeemii Yunivarsiitii Chikaagoorraa
''Takka caccabaansaa erga addabaafameen booda, akka waan bulbula furdaa wayiifi foolii cimaa kan qabu dha-akka dhadhaa sameetis jedhu.
Awwaarri dhakaa urjii irraa harca'e erga baafameen booda bulbulli kun asiidii keessatti callabbeefame.
''Lilmoo baasuuf cidii tuullaa tokko hanga gubuuti adeemsichi,'' jedhan Fiilip Heek.
Waantonni akka awwaaraa kuni waggaa meeqa akka jiraatan baruuf hawaa keessatti xiyya ifaaf hangam akka saaxilaman safarra. Xiyyoonni kunneen annisa olaanaa kan qaban yoo tahu gaalaaksii keessatti imaluun waantota jajjaboo keessa galu.
Xiyyoonni kunneen waantotatti yeroo walitti bu'an elamantii haaraa uumu. Hanguma walitti bu'ani immoo elemantiin isaan uuman baay'achaa adeema. Qorattoonnis foormii isootoop jedhamu kan elemantii Niyoonii- Ne-21 jedhamu fudhachuun umuriin waantota akka awwaara sanaa tilmaamr.
''Baaldii bishaan keessa kaa'uun. Bishaanicha akka waan dhaabbataatti fudhachuun bishaan achi keessatti kuufamu umuriin hangam akka tahe barame.'' jedhan Dr Heek.
Elemantoonni haaraa hangam jiru kan jedhu madaaluun waantonni akka awwaaraa sun xiyya ifaa hawaatti hangam akka saaxilaman itti hima. Kunimmoo karaa biraa umurii itti himani dha jechuu dha.
Awwaarri akka bulbulaatti argame kun umurii dheeraa isa qabu tahuun abuurameera.
Umuriin Aduu waggaa biiliyoona 4.6 yoo tahu, lafti immoo 4.5 dha.
Haa tahu malee waanti akka awwaaraa kuni garuu biiliyoona 7.5tti tilmaama.
Sirna 'seexana baasuun' booda namootni 7 du'an
UN biyyoonni biroo dhimma Liibiyaa keessaa harkasaanii akka baasan gaafate
Namtichi dubartoota gowwoomsuun fiilmii saal-qunnamtiisaanii agarsiise barbaadamaa jira